A na-atụ anya na ahịa mkpanaka graphite electrode zuru ụwa ọnụ ga-ahụ nnukwu uto. Akụkọ nyocha kachasị ọhụrụ, amụma 2028
Uto Uto Industry (IGI) wepụtara ha ọhụrụ graphite electrode mkpara ahịa nnyocha akụkọ na amụma maka ụlọ ọrụ na-esote afọ asatọ. Ụlọ ọrụ ahụ na-ebu amụma na site na 2028, ọchịchọ zuru ụwa ọnụ ga-eto site na XX%, na ahịa ga-eto eto na ọnụ ọgụgụ uto kwa afọ nke XX%. Site na nke a ...
Ụlọ ọrụ anyị amaliteghachila ọrụ na mmepụta.
site admin na 21-03-30
Ememme opupu ihe ubi agafeela, na ahịa graphite electrode ka nọgidere na-enwe ọganihu na-aga n'ihu. Companylọ ọrụ anyị amaliteghachila ọrụ na mmepụta ya na February 24, 2021, anyị nwere ike hazie nkọwapụta dị iche iche nke ike nkịtị, ike dị elu na elektrọd graphite ike dị elu. Nke qu...
Zute na ihe ngosi ụlọ ọrụ mba ụwa nke iri abụọ na ise, 2019
site admin na 20-12-31
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd agaala 25th International Industrial Exhibition, 2019 na Russia. Dị ka ọkachamara na-emepụta electrodes graphite, anyị ga-achọ ịnye ndị ahịa anyị ngwaahịa na ọrụ nke mbụ ma bụrụ onye na-ebubata gị ntụkwasị obi ...
Na Nọvemba 2019, onye na-azụ ihe elektrọd graphite Russia bịara Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd.
Na November 2019, Russian graphite electrode asịwo bịara Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd.Onye isi oche nke osisi so ndị ahịa gaa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma nye nkọwa zuru ezu na mmepe nke ụlọ ọrụ .Anyị ji ndidi zaa ajụjụ ndị ahịa anyị. na pr...
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. amalitela n'ihu ọha nkuzi calcining ọhụrụ na Ọkt.18th,2020.
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd bụ ọkachamara graphite electrodes emeputa. Kemgbe e guzobere ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ, onyeisi oche nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na-eduzi nhazi na nhazi, nlekọta na njikwa. N'ikpeazụ, arụchara ụlọ ọrụ ahụ nke ọma. fac ọhụrụ ...